कालापानी विवाद : भारतीय विस्तारवादको खुला नमुना – Upahar Khabar
कालापानी विवाद : भारतीय विस्तारवादको खुला नमुना
प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७७, सोमबार २१:२४ May 12, 2020
प्रा.डा. अक्कलदेव मिश्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा
नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसित सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । हाम्रो नरम परराष्ट्र नीतिका कारणले होला यदाकदा मानसिक तथा भौगोलिक पीडाको अनुभव हुने गर्दछ । सीमा अतिक्रमण नाकाबन्दी तथा विकास निर्माणका सवालहरुमा समस्याहरु आउने गरेका छन्, यो मामिलामा अहिले भारतको व्यवहार बढी मिचाहा प्रवृत्तिको देखिएको छ । कालापानी र सुस्ताका विवादहरु अहिलेका ठूला सीमा विवाद हुन् । सन् १६०८ मा पहिलो पटक ब्रिटिस व्यापारिक कम्पनीले भारतमा प्रवेश गर्यो र विस्तारै व्यापारिक प्रभुत्व बढाउँदै गयो । अझ १७५७ देखि ईष्टइन्डिया कम्पनीको नाममा शासन समेत गर्न थाल्यो र पछि सन् १८५८ देखि त भारतमा विधिवत रुपमा ब्रिटिश राज गर्न थाल्यो । ब्रिटिश शासकहरुले राज्य विस्तारको अभियान चलायो, जसको चपेटामा नेपाल पनि पर्यो ।
झण्डै २ सय वर्षको सक्रिय ब्रिटिश सम्राज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतले ब्रिटिशको सिको गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरुसँग बेला मौकामा कयौँ ठूला साना सीमा विवाद गर्दै आयो । जसको पछिल्लो उदाहरण दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित कालापानी, लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागको अतिक्रमण हो । सन् १८१६को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको महाकाली नदीको पूर्वको भू–भाग नेपाल र पश्चिमको भू–भाग भारत भनी सीमा निर्धारण गरियो । यो सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालमा पर्दछन् । झण्डै ४ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो क्षेत्रमा गुञ्जी, नाथी र कुटी गाउँहरु पर्दछन् । सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) मा जनगणना गरिएको यो क्षेत्रका बासिन्दाहरुसँग नेपाली नागरिकता तथा जग्गाधनी लालपूर्जा समेत रहेका छन् । साथै नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटरमा यो भू–भाग समेत समावेश गरिएको छ ।
पछि सन् १८५० ताका भारतले कुटिल तरिकाले महाकाली नदीको उद्गम लिपुलेकको खोला मानेर एकपक्षीय रुपमा ती भू–भागलाई आफ्नो भू–भागमा गाभ्दै लग्यो । जबकी सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेको छ ।
चीन सितको सुरक्षाको कारण देखाई भारतले सन् १९६२ मा कालापानीमा आफ्नो सैनिक ब्यारेक राख्यो । जसमा नेपालको सहमति थिएन, सीमा अतिक्रमणको क्रम अगाडी बढ्दै गयो र सन् २०१५ मा लिपुलेकमा रोड खोल्ने भारत र चीनबीच व्यापारिक सम्झौता भयो । त्यसमा नेपालको भूमि उपयोगको सवालमा नेपालसित सरोकार राखिएन । नेपालले दुवै देशहरुसित कुटनीतिक रुपमा गम्भीर आपत्ति जनायो तर कुनै सुनुवाई भएन । बरु भारतले सन् २०१९ मा त्यो भू–भाग समेत गाभेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जुन राजनीतिक, कुटनीतिक र मानवीय समवेदनाहरुको समेत पूर्णरुपले खिलापमा छ । यस घटनाका सम्बन्धमा नेपालले कुटनीतिक आपत्ति त जनायो तर सक्रिय प्रतिरोध गर्न सकेन । यसलाई नेपालको मौनता मानेर फेरी अहिले ८ मे २०२० मा भारतले विद्युतीय माध्यमबाट लिपुलेक हुदै चीनको मानसरोवर सम्मको ८० किलोमिटर बाटोको उद्घाटन गरेको छ ।
यसरी भारतले योजनाबद्ध रुपमा सन् १८१६ देखि अहिलेसम्म पनि नेपालको सीमा अक्रिमण गर्न काम गरिराखेको छ । सीमा सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपालको उपस्थिति सुस्त र अनविज्ञ जस्तो देखिन्छ । वक्तव्य दिने, विज्ञप्ति निकाल्ने, नाराजुलुस गर्ने, अवलोकन गर्ने, समिति बनाउने आदिमा मात्रै नेपालको प्रतिरक्षा प्रणाली सिमित छ । ठोस कदम चाल्ने काम कतैबाट पनि भएको छैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा सीमाविद्, भूगोलविद्, परराष्ट्रविद्, जलस्रोतविद् आदि सबै सरोकारवालाहरुसितको परामर्श विश्लेषण र कार्ययोजनाका आधारमा तत्काल सुगौली सन्धि अनुरुपको भू–भाग समावेश गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ र संसदबाट एउटै स्वरमा अनुमोदन गरेर कालापानी क्षेत्र बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्दछ । यसो गर्दा भारत चुप लागेर बस्न सक्छ या प्रतिक्रिया जनाउँन पनि सक्छ । यसको विरोध गर्न ऊ सँग कुनै नैतिक र राजनीतिक आधार भने हुदैन । भारतले देखाउने जुनसुकै किसिमको प्रतिक्रियाको पनि डटेर सामाना गर्ने हेक्का नेपालले राख्नुपर्दछ । सके द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय स्तरमा सामाधान खोज्ने र केहि सीप नलागे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस समस्याको सामाधान खोज्न नेपाल तत्पर हुनुपर्दछ ।
Posted in मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, विचार
थप १३ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, एकै दिन २४ जनामा काेराेना स‌ंक्रमण, कुल १३४
आजदेखि सेयर बजार खुल्ने
“मेरो भाषणलाई तोडमोड गरी एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे”: वनमन्त्री आले
पश्चिमी वायुको प्रभावः आंशिकदेखि सामान्य बदली रही वर्षा र हिमपातको सम्भावना
सर्वोच्चद्वारा ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपाकाे पक्षमा फैसला (फैसलासहित)